Depot Primobolan E Powder Muscle Gain Steroids 99% သန့်ရှင်းမှု Methenolone Enanthate CasNO.303-42-4
အလင်းတန်း-ကိုယ်အလေးချိန်ထိုးဆေး၊ အမျိုးသားအဆင့်မြှင့်တင်ရေး စတီးရွိုက်များ
Methenolone Enanthate (Primobolan Enanthate)အမြန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမည်- Metenolone acetate
နာမည်အရင်း- Primobolan;Methenolone Acetate;1-methyl-3-oxoandrost-1-en-17-yl acetate
CAS မှတ်ပုံတင်နံပါတ်- 434-05-9
ဆူမှတ်- 760 mmHg တွင် 441.201°C
ဆန်းစစ်ချက်- ၉၈% မိနစ်
Methenolone Enanthate သည် androgenic ထက် anabolic ပိုများသော စတီးရွိုက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။Methenolone Enanthate ကို Primobolan Depot တွင် ရလဒ်ကောင်းများပြသရန် အချိန်အလွန်ကြာသောကြောင့် အခြားသော steroids များနှင့်အတူ အသုံးပြုပါသည်။Methenolone enanthate ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်အလွန်ရှားပါးပြီး၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဘေးအကင်းဆုံး steroids များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ဤစတီရွိုက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကြွက်သားများ လျင်မြန်စွာရရှိလိုသူများအတွက်၊ ၎င်းကို sustanon-250 ကဲ့သို့သော အခြားသူများနှင့်အတူ အသုံးပြုနိုင်သည်။ဤစတီရွိုက်အတွက် အသုံးအများဆုံး ပေါင်းစပ်ဖြစ်သည့် Winstrol နှင့် Methenolone enanthate ကို ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါတွင် အကောင်းဆုံးရလဒ်များ ရရှိပါသည်။Methenolone Enanthate ၏တိုးမြှင့်ပမာဏကိုစွန့်စားရန်မကြောက်သူများသည်ဤ steroid ကိုသုံးနိုင်သည်။
Primobolan သည် stacking နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအခြေအနေတစ်ခုကိုတင်ပြသည်။ဆေးဝါးဗေဒအရ Masteron နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက stacking အပြုအမူတွင် ကွာခြားမှု မရှိနိုင်သော်လည်း အရေးကြီးသော ကွာခြားချက်မရှိသော်လည်း လက်တွေ့တွင် Primobolan ကို အသုံးပြုလိုသူများသည် အမြဲတမ်းလိုလို အပျော့စား stacking ရွေးချယ်မှုများကို ရှာဖွေနေပါသည်။ဤအကြောင်းကြောင့်၊ Dianabol၊ Anadrol၊ သို့မဟုတ် Testosterone တို့သည် ထိရောက်သော stacking ရွေးချယ်မှုများဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့ကို Primobolan နှင့် ပေါင်းစပ်မထားပါ။
Methenolone Enanthate (Primobolan Enanthate)Depot လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် လက္ခဏာများ
Methenolone သည် dihydrotestosterone (DHT) ၏ ဆင်းသက်လာခြင်း သို့မဟုတ် အထူးသဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ ပြောင်းလဲထားသော ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ဟော်မုန်း၏ဖွဲ့စည်းမှုမှာ DHT ဖြစ်ပြီး ကာဗွန်ရာထူးတစ်ခုနှင့် နှစ်ခုတွင် ထပ်လောင်းနှစ်ထပ်နှောင်ကြိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် steroid ၏ anabolic သဘောသဘာဝကို များစွာတိုးစေသည်။၎င်းသည် ဟော်မုန်းကို အသည်းပြိုကွဲခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည့် 1-methyl အုပ်စုကိုလည်း သယ်ဆောင်သည်။Primobolan Depot ၏ကိစ္စတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော Methenolone ဟော်မုန်းသည် Enanthate ester တစ်ခုနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ဤ ester သည် ၎င်းကို သိသိသာသာ နှေးကွေးစေသော ဟော်မုန်းထွက်ရှိချိန်ကို ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။အရေးကြီးသောမှတ်ချက်တစ်ခု၊ တစ်ကြိမ်တွင် Methenolone Acetate ထိုးဆေးကို ရနိုင်သည်။သို့သော်လည်း ဤထုတ်ကုန်ကို 1993 ခုနှစ်တွင် ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ လောလောဆယ်တွင် Methenolone Acetate ကို သင်ရရှိနိုင်မည့် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ ပါးစပ် Primobolan တွင် သို့မဟုတ် ထိုးဆေးဗားရှင်းကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ဖြစ်သည်။သို့သော်လည်း Methenolone Acetate ထိုးဆေးသည် ရှားပါးသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။အကယ်၍ သင်သည် ဦးစားပေး အကြံပြုထားသော ပုံစံဖြစ်သည့် ၎င်း၏ ထိုးဆေးပုံစံ Methenolone ဟော်မုန်းကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက Primobolan Depot သည် အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောဗားရှင်းဖြစ်သည်။
Methenolone Enanthate (Primobolan Enanthate)ဒိုင်နှင့်
စမ်း စံ ရလဒ်များ
အရည်ပျော်မှတ် 65ºC~71ºC 66ºC~70ºC
အတိအကျလှည့် +38°~ +42° +40.1°
ဆန်းစစ်ချက် 97~102% 99.1%
နိဂုံး သတ်မှတ်ချက်သည် Enterprise Standard နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
1) အရည်အသွေးကောင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်၏ အခြေခံဖြစ်သည်။
1) ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ နည်းပညာမြင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
2) ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ 98% သည် UK၊ USA၊ ဂျာမနီ၊ စပိန်၊ သြစတြေးလျ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အခြားနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ထားသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံမှ အလွန်ကောင်းမွန်သော တုံ့ပြန်ချက်ရရှိပါသည်။
3. ဘေးကင်းပြီး အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း။
1) ငါတို့တွင်စတော့ရှယ်ယာရှိသည်, ဒါကြောင့်ပါဆယ်ထုပ်ကိုငွေပေးချေပြီးနောက် 24 နာရီအတွင်းအထွက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ခြေရာခံ နံပါတ် ရနိုင်ပါသည်။
2) အကောက်ခွန်ဖြတ်သန်းနှုန်း ≥ 99%
ပက်ကေ့ဂျ်အပ်ဒိတ်ကို အမြန်ဆုံးပြောပြပါ၊ ဝယ်ယူသူသည် ပြဿနာအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့လာသောအခါတွင် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးပါမည်။
Dianabol ၅၀ 50 mg/ml
Winstrol ၂၅ 25 mg/ml
Clomid ၅၀ 50 mg/ml
Armidex ၅5mg/ml
Femara ၅5mg/ml
ကလေး Durabolin 200 200 mg/ml
Durabolin 250 ကလေးများ 250 mg/ml
NPP ၂၀၀ 200 mg/ml
Testosterone Propionate 100 (Propionate 100) 100 mg/ml
Boldenone Cypionate 100/200 100 mg/ml သို့မဟုတ် 200mg/ml
Trenabol 100 (အခြေခံရထား) 100 mg/ml
Trenbolone Hexahydrobenzyl ကာဗွန်နိတ် 50 50mg/ml
Drostanolone Propionate 100 (မာစတာရွန် 100) 100 mg/ml
Drostanolone Enanthate 200 (မာစတာရွန် ၂၀၀) 200 mg/ml
* တက်စတိုစတီရုန်း Isocaproate
ယခင်- Primobolan Enanthate ထိရောက်မှုရှိသော ခံတွင်း Primobolan Enanthate , 99% သန့်ရှင်းမှု Methenolone Enanthate Powder CasNO.303-42-4
နောက်တစ်ခု: Methenolone Acetate Powder GMP ခံတွင်းကြွက်သားရရှိခြင်း Steroids တက်ဘလက် Primobolan A CAS 434-05-9
Methenolone Enanthate Powder ၊
Primobolan E Powder ၊
99% Anabolic Steroid အစိမ်းမှုန့် Methenolone Ena...
99% သန့်ရှင်းမှု Methenolone Enanthate ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှု ...
Muscle Builder Steroids Primobolan E Methenolon...
တရုတ်အရောင်းရဆုံး Primobolan Acetate ကုန်ကြမ်းမှုန့်...
ကြွက်သားအစစ်အမှန် Primobolan A Steroids Hormones ရရှိ...
Methenolone Enanthate ကုန်ကြမ်းမှုန့် CAS 303-42-4 S...
Methenolone Enanthate Hormones Primobola ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း...
အထိရောက်ဆုံးအရည် 100mg/ml Anabolic Steroid...
Primobolan Enanthate 200mg/ml ခွန်အားဖြည့်ဆေး...
Methenolone Enanthate Powder Bulking ထိုးဆေး...
Primobolan Enanthate ထိရောက်သောခံတွင်း Primobolan ...
Depot Primobolan E Powder Muscle Gain Steroids...